‘सरकारको आयु छोट्टिदै गएको कांग्रेसको बुझाइ’ - BBC News नेपाली
‘सरकारको आयु छोट्टिदै गएको कांग्रेसको बुझाइ’
3 मे 2016
Image caption नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनले हालै नयाँ नेतृत्व चुनेको थियो
नेपाली कांग्रेसले सरकारको विकल्पको वातावरण बन्दै गएको विश्लेषण गरेको छ।
सरकार विरुद्ध संसदमा कडा ढंगले पेश हुने निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार र मंगलबार भएको बैठकपछि कांग्रेसका एकजना नेताले त्यस्तो निष्कर्ष सुनाएका हुन्।
तर उनले दीगो विकल्पमा कांग्रेसको ध्यान दिने भन्दै सरकार परिवर्तन एकीकृत माओवादीको निर्णयमा भर पर्ने संकेत दिए।
मंगलबारबाट संसद अधिवेशन शुरु भएको छ।
त्यससँगै सरकार परिवर्तनको चर्चा पनि चुलिएको छ।
सरकार परिवर्तनको अभ्यास भोलि देखि नै गर्छौं भन्ने स्थितिमा हामी पुगेका छैनौं। अहिलेलाई हामी एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं । तर ढिलो चाँडो त्यसको वैकल्पिकमा पुग्ने स्थिति बन्दै गएको जस्तो लाग्छ
प्रकाशशरण महत, एकजना कांग्रेस नेता
सरकारको काम कारवाहीप्रति निकै असन्तुष्ट देखिएका कांग्रेस सांसदहरुले सोमबार र मंगलबार भएको संसदीय दलको बैठकमा विकल्प खोज्नु पर्ने आवाज समेत उठाएको बताइएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेता प्रकाशशरण महतले बैठकपछि भने, “ सरकार परिवर्तनको अभ्यास भोलि देखि नै गर्छौं भन्ने स्थितिमा हामी पुगेका छैनौं। अहिलेलाई हामी एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं । तर ढिलो चाँडो त्यसको वैकल्पिकमा पुग्ने स्थिति बन्दै गएको जस्तो लाग्छ। ”
कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार सकिएको बैठकले सरकारको विकल्प खोज्ने अग्रसरता लिन चाहेको संकेत दिने गरी राजनीतिक समस्या समाधानको निम्ति ‘वार्ताको अगुवाइ गर्न’ आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ।
एमाले र प्रधानमन्त्री समक्ष औपचारिक रुपमा असन्तुष्टि र छलफलको प्रस्ताव पठाएको भन्ने एकीकृत माओवादीका कतिपय नेताको भनाइले सरकार धरमराएको चर्चालाई टेवा दिएको हो।
तर एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, “ विधि प्रकृया अनुसार आउने जाने कुरालाई अनुरुप लोकतन्त्रमा कुनै अनौठो मान्नु हुंदैन। तर तपाईले भन्नु भएको प्रसंग हामी कहाँ आइपुगेको छैन र हामीले बुझेका पनि छैनौं। ”
विकल्प खोझ्ने मनस्थिति बनाउँदै गएको जस्तो देखिएको कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले नयाँ सरकारको दीगोपनामा ध्यान दिने बताए।
त्यो भनाइको आधारमा कांग्रेस साना तिना दलहरुको भरमा भन्दापनि माओवादी सहितको वैकल्पिक सरकार चाहन्छ भन्ने अर्थ्याउन सकिन्छ।
त्यस्तो स्थितिमा कांग्रेसको महत्व निसर्त सरकारको विस्थापन हुनेछ वा आफ्नो नेतृत्व सहितको?
नेता महतले भने, “सवैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले विकल्प खोज्दा कांग्रेसले नेतृत्व गर्दा त्यो विश्वसनीय हुन्छ। त्यो भन्दा अरुको विकल्पमा जाने विषयमा सोच्ने बेला भएको छैन।”
कांग्रेस नेताहरुको मनस्थिति बुझ्दा तत्काल सरकार परिवर्तन माओवादी त्यसमा पनि खासगरी प्रचण्डको निर्णयमा धेरै हदसम्म भर पर्ने देखिन्छ।
सरकारको नेतृत्व आफ्नो काँधमा आउने स्थितिमा बाहेक प्रचण्डले ओली सरकारको विकल्प खोज्न तयार होलान्? वा कांग्रेस उनलाई नेतृत्व दिन तयार होला?
ओली सरकारको भविष्य तिनै प्रश्नको जवाफमा निर्भर देखिन्छ, जसको जवाफ प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई मात्र दिनसक्छन्।